ILAKA EST- VATOMANDRY : Nahitana zaza sampona toka-maso
Tranga tsy dia fahita firy no niseho tao amin’ny Kaominina Ilaka-Est distrikan’i Vatomandry. 20 février 2018
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana, dia ramatoa iray no niteraka zaza sampona.
Ny marainan’ny alahady 18 febroary lasa teo no voalaza fa teraka ilay ramatoa. Akory anefa ny hagagana fa zaza toka-maso, tsy misy orona, tsy misy taovam-pananahana sy fivoahan’ny maloto io teraka io. Tsy fantatra na lahy na vavy. Ny angom-baovao voaray avy any an-toerana hatrany no nahalalana fa ny antoandron’ny alahady 18 febroary io ihany, dia maty ilay zaza sampona.
Ao ireo nilaza fa vokatry ny ody ratsy nataon’olona no nahatonga izany. Misy kosa ireo nitondra fanazavana siantifika fa vokatry ny fiovan’ny Adn. Ao koa anefa ireo niteny fa saika noesorina ilay zaza kinanjo tsy afaka ka izao nisy fahasamponana izao rehefa teraka.
Tranga efa niseho tao amin’ny Hopitaliben’i Toamasina
Ny volana aogositra 2012, dia efa nisy trangana zaza sampona teraka mitovitovy tamin’io tao amin’ny Hopitaliben’i Toamasina. Akory ny hatairan’ny mpampivelona tamin’izany fa ny vodin’ilay zaza no nivoaka mialoha, izay vao nanaraka ny vatany. Tafavoaka soa aman-tsara kosa ilay zaza fa sampona tanteraka. Nitambatra ny tongony roa (havia sy havanana), tsy nisy taovam-pananahana ary tsy misy ihany koa ny fivoahan’ny maloto.
Marihina fa teo amin’ny fahafito volan’ny vohoka no teraka ity zaza sampona ity, izany hoe teraka tsy ampy volana ary tovovavy 16 taona ny reniny. Ny volana febroary 2015, dia nisy trangana zaza sampona nampivarahontsana ny maro toa io ihany koa tao amin’ny Hopitaliben’i Toamasina. Renim-pianakaviana iray no teraka kambana, ka ny iray dia teraka soa aman-tsara no sady olona feno, fa ny iray faharoa kosa teraka sampona, izay niendrika sahona nilanja 5 kg.